Uthotho lweewadi leapile 6: 40mm vs 44mm, loluphi uthotho lweewindows olubonisa ubungakanani obona bulungileyo kuwe?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uthotho lweApple 6: 40mm vs 44mm, loluphi ubukhulu be-Apple Watch 6 ubungakanani obulungele wena?
Uthotho lweApple 6: 40mm vs 44mm, loluphi ubukhulu be-Apple Watch 6 ubungakanani obulungele wena?
Inkqubo ye- Uthotho lweeApple 6 , Okuninzi Imibala emibala yeApple Ukuza kuthi ga ngoku, inika umdla kwimpilo kunye nokuqina komzimba, ukubeka iliso kwioksijini yegazi, kunye ne-app yeECG yokujonga isingqi sentliziyo yakho Ngaphezulu, zonke ezi zinto zipholileyo zipakishwe kuyilo oluhle nolwanamhlanje loxande. Ityala le-Apple Watch Series 6 lingena kwi-aluminium, intsimbi engenasici, okanye titanium , kwaye siyicacisile Umahluko phakathi kwezi ndlela . Kodwa kuthekani ngokulinganisa? Ukuba uyazibuza phakathi kweApple Watch Series 6 40mm kunye 44mm, funda njengoko sixoxa ngomahluko.
Uthotho lweeApple 6 40mm
Ngokucacileyo, i-40mm inesiboniso esincinci xa kuthelekiswa ne-Apple Watch 6 44mm. Ngaphandle kobungakanani bokubonisa nangona kunjalo, iwotshi encinci. Umzekelo, ukuba kunokwenzeka ukuba ube nesihlahla esincinci, unokufuna ukuya okwahlukileyo njengoko i-44mm enkulu inokubonakala kwaye uzive ulungile. Yazi, isenokungalingani!
U-Apple uthi i-40mm ye-Apple Watch Series 6 iya kulunga ii-130-200mm izihlahla, ke yigcine engqondweni. Ukongeza, iApple Watch 6 40mm yeyona nto ikhaphukhaphu eyahlukileyo kwezi zibini, nangona ziziigram ezimbalwa.
Uthotho lweeApple 6 44mm
Umboniso weApple Watch Series 6 44mm ngokucacileyo yeyona inkulu. Nangona kunjalo, ayijongi nje kuphela. Umboniso we-44mm unamaphikseli amaninzi, kwaye isicatshulwa sinokuvela sikhulu kwezinye iindawo kuwo. Ukongeza, inobunzima obungaphezulu kweegram ezimbalwa ezingama-40mm.
Iya kulunga ii-wrists ze-140-220mm, ke ukuba isihlahla sakho sikwicala elikhulu, ngokuqinisekileyo iya kuba yeyona ndlela ilungileyo yokuya kwi-44mm.
Umahluko phakathi kweApple Watch Series 6 40mm vs 44mm boniso:
Uthotho lweApple 6 40mm: umboniso zii-1.57inches ezinesisombululo se-494 x 324
I-Apple Watch Series 6 44mm: umboniso zii-1.78inches, 448 x 368 resolution
Uthotho lweApple 6 (40mm)
$ 399Thenga kwiApple
$ 399Thenga kwiBestBuy
$ 399Thenga kwiithagethi
Ukutshatisa ubungakanani besandla se-Apple Watch Series 6
Nangona ukuthelekisa ubungakanani besandla sakho kubalulekile ukuba ucinge ngaphambi kokuthenga i-Apple Watch, abanye abantu banokuhamba bengakhange bayiqwalasele. Ngokubanzi, kwinqanaba elingcono lokuthuthuzela kuya kufuneka ufumane iApple Watch elingana nobungakanani besihlahla sakho, kodwa kwezinye iimeko umahluko kubungakanani besihlahla awuyi kuchonga ukuthengwa kwakho. Umzekelo, isihlahla sakho sinokujikeleza i-150mm, ke unokuya kuzo zombini iindlela. Nangona kunjalo, kuhlala kulungile ukuzama iApple Watch kwiVenkile yeApple yendawo ukuze uqiniseke ukuba uyayonwabela indlela ejongeka ngayo kuwe kunye nendlela oziva ngayo ngayo esihlahleni sakho.
Kwakhona, khumbula ukuba ubude beebhendi ezininzi ezikhoyo zihlala zihambelana nobungakanani bewotshi. Oku kuthetha ukuba amaqhekeza amancinci awanakufumaneka kuma-44mm kunye namabhanti amakhulu angama-40mm, kwaye nangona kungenakwenzeka ukuyifumana, kunokuba nzima ukwenza njalo.
I-Apple Watch Series 6 40mm vs 44mm: Ixabiso
Uluhlu olukhulu lwe-Apple Watch 6 44mm yeyona nto ibiza kakhulu. Kwimodeli esemgangathweni ye-Apple Watch Series 6, i-40mm inexabiso nge- $ 399, ngelixa i-44mm Apple Watch 6 inexabiso elingama- $ 429. Ukuba ukhetha okwahlukileyo okubiza kakhulu, umzekelo omnye ngensimbi engenasici okanye ityala le-titanium, ixabiso liya kuba malunga ne-50 yeedola ngaphezulu kwe-44mm Apple Watch.
Phuma: Eyona misebenzi mihle yokujonga iApple ngoku
Ekugqibeleni, konke kuyabila kukhetho lwakho lobuqu, kuba unokufuna iwotshi enkulu kakhulu, nokuba unesihlahla esincinci, okanye ngokuchaseneyo. Ngaphandle komehluko okhankanywe apha ngasentla ngobukhulu kunye nobunzima, uyilo, imibala yecala kunye neebhendi, kunye nazo zonke iipremiyamu kunye nezinto ezinomdla zeApple Watch Series 6 ziyafumaneka kuzo zombini i-40mm kunye ne-44mm eyahlukileyo.
Okungakumbi kwi-Apple Watch Series 6:
Umahluko phakathi kwe-ipad 7 kunye ne-8
Bukela umsitho weapile usasaza ngqo
i-galaxy tab kunye nepeni
I-Apple isasaza i-iOS 12.5.1; yeyiphi imodeli ye-iPhone eyenzelwe yona kwaye yenza ntoni?
IVirgin Mobile yokuthengisa i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus engaphambi kokuthandwa ngexabiso eliphantsi njenge- $ 380
Umhla wokukhutshwa kweGPS S11 kunye nomsitho, imo yevidiyo yePro
I-AT & T & apos; ukuhlaziywa kwe-Samsung Galaxy Note 4 kukhunjulwa ngenxa yeebhetri zomgunyathi
I-Samsung Galaxy Prevail LTE iza kwi-Boost Mobile ngoJanuwari 19th ngenkxaso yeSprint Spark
Uyijonga njani i-Apple iPhone yakho kunye ne-apos; ibhetri yezempilo: ukubala kwebhetri kunye nolunye ulwazi
I-Google Pixel 4 XL vs iPhone 11 Pro Max
Hayi, kusenokwenzeka ukuba awufanelanga ukuba usebenzise imvakalelo yentsholongwane kwi-FaceApp ukuze uzenze ubonakale umdala
I-Apple Bukela i-SE ngaphandle kwebhokisi
Uvavanyo lwebhetri lwe-iPhone SE (2020) lugqityiwe: la manani atyumza iHype